how to connect domain .com to .co.cc — MYSTERY ZILLION
how to connect domain .com to .co.cc
July 2011 edited July 2011 in Web Base
ဟိုတရက်ကကျွန်တော် ဒိုးမိန်း၀ယ်လိုက်ပါတယ်။ တခါမှမချိတ်ဖူးပါဘူး။ မနေ့ကစမ်းကြည့်တာတော့ domain ဘက်က control panel ကနေ domain forward လုပ်လိုက်တာ ချိတ်တော့ချိတ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် url ကအသေဖြစ်နေပါတယ်။ ဆိုလိုတာက / ပဲအမြဲဖြစ်နေပါတယ်။ /something/somewhere.html မျိုးမဖြစ်ပါဘူး။ အဲဒါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိပါဘူး။ hosting panel ထဲမှာတော့
parked domain ဆိုတာရယ် addon domain ဆိုတာရယ်တွေ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့လုပ်ရမှာလား နောက် hosting panel ထဲမှာရော domain panel ထဲမှာပါ Name Server လေးခုတွေ့ပါတယ်။ hosting panel ထဲက NS ကို domain panel ထဲကိုထည့်ရမှာလား ဒါမှမဟုတ် domain ထဲကဟာကို hosting ထဲကိုထည့်ရမှာလားသိချင်ပါတယ်။ လောလောဆယ် domain က m0rris.com ပါ။ @Saturngod
NS Record ဖြည့်ဖို့လိုတယ်။ ဥပမာ။။ bluehost ဆိုရင် သူ့ရဲ့ NS record က
အဲဒီ ၂ ခုကို domain control panel ရဲ့ NS Record မှာ သွားထည့်ပေးရတယ်။ ပြီးမှ hosting ဘက်မှာ domain name ထည့်။ အဲဒါပြီးရင် ၁၂ နာရီ စောင့်ရတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် အသေးစိတ် Step by Step ဖြစ်ဖြစ် ရှင်းပြပေးကြပါ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် Domain နဲ့ပတ်သတ်ရင် အခုမှ0က စကြမှာမို့လို့ပါ။ !_!
domain ကို ဘယ်ကနေ ဝယ်ထားတာလဲ။ လက်ရှိ hosting က ဘာလဲ။
domain က ကို @Seinkalar ဆီကဝယ်တာပါ။ hosting ကတော့ ကို @Yarzar aung ပေးတာပါ။ လောလောဆယ်လုပ်ထားတာ addon domain ဆိုပြီး ၀ယ်ထားတဲ့ domain နဲ့ acc create လုပ်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုစေတန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ hosting ထဲက NS record တွေကို domain panel ထဲသွားဖြည့်ပါတယ်။ ပြီးရင်ဘာကျန်သေးလဲမသိဘူး။ wordpress dashboard ထဲမှာရောပြင်ရမှာလားမသိဘူး
July 2011 edited July 2011 Administrators
Yes. It done. You need to wait around4to 12 hour for ns records update.
how about now ? any problem ?
everything seem fine now . we can see the default.php and the rest is join database from otherside and install wordpress . i guess so . any better idea ???